Anyị ga-ekwurịta ụfọdụ ihe ndị kasị nkịtị iPhone Kalinda mbipụta na isiokwu a tinyere ha ngwọta.
Enweghị ike tinye ma ọ bụ n'anya ihe ndị na iPhone Kalinda
Ọrụ nwere kọrọ nsogbu na-azọpụta ihe n'ihi ụbọchị na n'oge gara aga; ọtụtụ ndị kwuru na ihe omume na-a gara aga ụbọchị na-egosi na ha na kalenda ole na ole sekọnd na mgbe ahụ, ha na-arahụ. The yikarịrị kpatara nke a bụ nsogbu bụ na gị iPhone Kalinda bụ ịlụ synchronized na iCloud ma ọ bụ ọzọ online kalenda ọrụ na kwa na gị iPhone atọrọ ka mmekọrịta nanị na-adịbeghị anya kasị ihe. Ịgbanwe ya, na-aga Ntọala> Mail> Ndi ana-akpo> kalenda; ebe a ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ '1 ọnwa' dị ka ndabere ọnọdụ. Ị nwere ike pịa a nhọrọ ịgbanwe ya izu 2, 1 ọnwa, ọnwa 3 ma ọ bụ 6 ọnwa ma ọ bụ ị nwekwara ike họrọ All ihe n'ihi syncing na ihe niile dị na kalenda gị.
Kalinda egosi adabaghị ụbọchị na oge
Ọ bụrụ na gị iPhone Kalinda na-egosi na-ezighị ezi ụbọchị na oge, na-eso nzọụkwụ ndị a nke ọma ma otu mgbe ndị ọzọ ka ewe dozie nke.
Nzọụkwụ 1: Jide n'aka na i nwere ihe ndị kasị ruo ụbọchị version nke iOS na gị iPhone. Ihe kacha ụzọ nke na-eme nke a bụ imelite gị iPhone-ejighi eriri n'elu ikuku. Ikwunye na gị iPhone na a ike isi iyi, na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update wee pịa on Download na Wụnye na mgbe ahụ mgbe popup windo na-egosi, họrọ Wụnye na-amalite echichi.
Nzọụkwụ 2: Tulee ma ị nwere nhọrọ maka eme ụbọchị na oge-emelitere na-akpaghị aka; aga Ntọala> Ozuruọnụ> Ụbọchị & Time na-atụgharị na nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: Jide n'aka na ị nwere ezi oge mpaghara guzobere na gị iPhone; aga Ntọala> Ozuruọnụ> Ụbọchị & Oge> Mpaghara Oge.
Kalinda ọmụma furu efu
Ụzọ kasị mma ị hụ na ị ghara ida gị niile Kalinda data bụ Archive ma ọ bụ mee mbipụta nke kalenda gị si iCloud. Iji mee nke a na-aga iCloud.com na abanye na na gị Apple ID, mgbe ahụ, na-emeghe Kalinda na-eso ya n'ihu ọha. Ugbu a, detuo URL nke a na-akọrọ kalenda, na-emeghe ya na nke ọ bụla gị nchọgharị (Biko mara na kama 'http' na URL, ị nwere iji 'webcal' tupu ịpị Tinye / Return button). Nke a ga-ibudata na ICS faịlụ na gị na kọmputa. Tinye a Kalinda faịlụ ka ọ bụla nke kalenda ahịa na i nwere na kọmputa gị, n'ihi na ihe atụ: Outlook maka Windows na Kalinda maka Mac. Ozugbo i mere ihe a, ị ọma ebudatara a oyiri nke kalenda gị si iCloud. Ugbu a, na-aga azụ iCloud.com na-akwụsị na-ekere òkè na kalenda.
Tupu idozi ihe iseokwu nke oyiri kalenda na gị iPhone, abanye n'ime iCloud.com na-ahụ ma ọ bụrụ na kalenda bụ duplicated n'ebe ahụ dị ka nke ọma. Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ ị ga-kpọtụrụ iCloud Nkwado n'ihi na ihe enyemaka.
Bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ, na-amalite site-enye ume ọhụrụ na kalenda gị na iPhone. Na-agba ọsọ na-eji ngwa Kalinda na pịa na taabụ Kalinda. Nke a ga-egosi na ndepụta nke gị niile Kalenda. Ugbu a, sere ala na ndepụta a ka ume. Ọ bụrụ na-enye ume ọhụrụ na-adịghị dozie nsogbu ahụ nke oyiri kalenda mgbe ahụ ego ma ọ bụrụ na i nwere ma iTunes na iCloud set ka mmekọrịta gị kalenda. Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ gbanyụọ mmekọrịta nhọrọ na iTunes dị ka na ma nhọrọ na, kalenda wee duplicated, otú ahapụ dị nnọọ iCloud melite ka mmekọrịta gị na kalenda, ị ga-ahụ ọzọ oyiri kalenda na gị iPhone.
Enweghị ike ịhụ, tinye ma ọ bụ download Mgbakwụnye ka a kalenda omume
Nzọụkwụ 1: Gbaa mbọ hụ na Mgbakwụnye na-akwado; na-esonụ bụ ndepụta nke faịlụ na ụdị na ike ga-mmasị ka a na kalenda.
• Pages, keynote, na Ọnụ Ọgụgụ akwụkwọ. The akwụkwọ kere iji keynote version 6.2, peeji nke version 5.2 na Ọnụ Ọgụgụ 3.2 mkpa ka a abịakọrọ tupu a mmasị.
• Microsoft Office akwụkwọ (Office '97 na ndị nke ọhụrụ)
• Ọgaranya Text Format (RTF) akwụkwọ
• PDF faịlụ
• Text (.txt) faịlụ
• rikoma-iche bara uru (CSV) faịlụ
• abịakọrọ (ZIP) files4
Nzọụkwụ 2: Gbaa mbọ hụ na ọnụ ọgụgụ na size nke Mgbakwụnye bụ n'ime 20 faịlụ na bụghị ihe karịrị 20 MB.
Nzọụkwụ 3: Gbalịa-enye ume ọhụrụ Kalinda
Nzọụkwụ 4: Ọ bụrụ na niile nzọụkwụ n'elu ka na-adịghị edozi a nke, ịkwụsị na reopen Kalinda ngwa ozugbo.
> Resource> iPhone> iPhone Kalinda Nsogbu